Dhacdo Xanuun Badan!! Gabar Soomaaliyeed oo dishay Ninkeedii !!! - iftineducation.com
Waxaa wali soo baxaya warar dheeraad ah oo ku saabsan gabarta Soomaaliga ah ee ku dhiiratay inay qoorta ka gooyso nin keedii ay jeclayd, kadib khilaafaad waayadii danbe hareerayay labadooda.
Magaalada Johannesburg ee Dalka K/Afrika waxa ka dhacday Dhacdo Xanuun iyo uur kutaalo reebtay kadib markii ay halkaasi Haweeney Soomaaliyeed ay dhawan Ninkeedii ayu u dhaxday Dil arxan dara ah ugu geesatay.
Haweeneyda ayaa la sheegay in Ninkeeda Xili uu hurdayay ay Toorey ku dishay iyadoona dhoor meel kaga dhufatay toorey si uusan nolol danbe u helin ,balse dhaawac halis ah oo soo gaaray ayuu Marxuunka ugu geeriyooday Isbitaal kuyaala Magaalada Johannesburg ee Dalka Koonfur Afrika.
Marxuunka ay Dishay Haweeneydan ay Naxariista ka guurtay ayaa la oran jiray Maxamed Cilmi oo kumagac dheer (Gaagaale) in Mudo ahna ku noolaa Dalkaasi ,iyadoona la sheegay in haweeneyda Ninkeeda ay dishay aysan u dhalin wax caruur ah balse ay in mudo ah wada noolaayeen.
Warar kale aan helayno ayaa sheegaya in Marxuun Gaagaale ay Dishay Gabar uu adeer u ahaa oo ay dhashay Xaaskiisa ,hasa ahaatee wararka saxda oo ay inoo xaqiijiyeen dadka Gob joogayaasha ah ayaa loo badinaya in ay Dilka ka danbeysay Xaaskiisa balse gabdha iyadana ay xiligaasi goobta ku sugneed.
Macada Sababaha dhabta ah ee Haweeneydaan u dishay Ninkeeda , waxaasa loo badinayaa in ay u dishay Maseer sida ay dad goob joogayaal ah oo xog badan ka hayay ay inoo sheegeen.
Dhacdadan Xanuunka badan ayaa waxa ay Joganesburg iyo Guud ahaan South Afrika ay ka noqotay mid ay dadku aad u hadal hayaan iyaga oona sheegay dadku in ay dhacdadan aheyd mid xanuun badan uur kutaalana reebtay in haweeney disho ninkii iyada u dhaxay.
Haweeneydii Dilka Geesatay ayaa lagu waramayaa in aan wali gacanta aysan ku dhigin Ciidamada Booliiska ayna hada ku nooshahay qeybo kamid ah Magaalada Johanesburg ee Dalka Koonfur Afrika.
Dhacdan ayaana waxa ay noqoneysaa tii ugu horeysay ee Ceenkeeda ah ee ka dhaca Magalada Johansburg ee Dalka K/Afrika iyadoona hada ay cabsi badan lasoo daristay raga Qaba haweenka Maseerka badan iyo kuwa kul kulul iyaga oo ka cabsi qaba in ay waxyeelo taa lamid ah u geestaan.
Iska key Illow (Qiso Jaceyl oo xiiso badan)Qeybtii 15-aad